ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Down ကိုသင်ရယူခြင်း?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ & လိင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုအကြံဉာဏ်.
အညွှန်းနေအိမ်အကြံLove & Sex ကိုပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအွန်လိုင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Friendly
အားဖြင့် ဂျူလီ Ritchie
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Down ကိုသင်ရယူခြင်း?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 14 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကိုယ်တော်သင့်ရာစေ့အဖြေမရသောက e-mail ကိုစေလွှတ်သောအခါထိုသို့ဘယ်လိုသိ, သင်လက်ထပ်ရအံ့သောငှါထွက်လာလှည့် chatting လုပ်နေကြတယ်ကြသည်ကိုကောင်းတဲ့လူကို / အမျိုးသမီးတစ်ဦး, သင်တကယ်ကြိုက်တယ်ကြောင့်တစ်ဦးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမပါဘဲပျောက်သွားပြီးသူသည်ဇာတိပကတိ၌ကတူဘာမှမကြည့်ရှုမထောင်သောကြောင့်သင်နောက်ဆုံးအပတ်ကနှင့်အတူတက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်လူတစ်ဦးကိုအနည်းဆုံးဆယ်နှစ်နှစ်အရွယ်ရှိ၏တဲ့ပုံမှာ posted ဖြစ်ရမယ်! ဒါဟာတော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရနိုင်တယ်.
၎င်းသည်သင့်အားသင် snobby ဖြစ်ဆိုလိုကြောင်းကိုမယ်, သမ္မာတရားသင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်လူတိုင်းကစားဂိမ်းတစ်ခုခုဖြစ်လိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်, လိင်ရှာဖွေနေ, သူတို့ရဲ့ဖြစ်သူနှင့် ပတ်သက်. သူတို့ပခုံးပေါ်မှာ chip ကိုအမျက်ထွက်, သူတို့ကိုမော်ဒယ်တူအောင်တစ်ခုအရုပ်ဆိုးချောင်းကိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံ-ဝယ်ယူသူတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုဝင်တိုက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ပဲလွင်ပြင်အခွံမာသီးများမှာခဲ့သည်! ကကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအသံဆိုပါကရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, နှင့်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အတွက်တခါတရံတွင်ခံစားရနိုင်တယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်. သင်ကျောက်စိမ်းရဖို့အထူးသဖြင့်ဆိုရင်! ဝမ်းနည်းစရာကဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏သင်ပင်ပန်းသည်ဟုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်, စိတ်ပျက်နေထွက်ကိုမီးရှို့. အချို့ကိစ္စများတွင်ပင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အဘို့အထွက်ရှိ၏ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်စေခြင်းငှါ!
အဆိုးဆုံးကိစ္စငါလုံးဝသုတ်ပဝါအတွက်ပစ်ခြင်းငှါလူကိုသိရကြပြီ, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလုပ်မဖြစ်ဘူးကကြွေးကြော်, သို့မဟုတ်ပဲ weirdos အဘို့အကြောင်း, သို့မဟုတ်သမျှဇာတ်လမ်း၏ဗားရှင်းသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပြ. ငါသည်သင်တို့ကိုတခုပြီးတခုစိတ်ပျက်စရာတွေ့ကြုံခံစားနေပုံရသည်အခါစိတ်မကောင်းမပါဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး Look, သို့သော်ဤနေရာတွင်အားလုံးခြားနားချက်ရှုထောင့်တွင်သေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဘယ်သို့သော – သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြည့်ရှုသောအားဖြင့်မှန်ဘီလူး့အနည်းငယ်ကို '' ပေါ်အောင် ''.
အဘယ်အရာကိုသင်ဒီမှာမှတ်မိဖို့ရှိသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သင့်ရဲ့ 'ပစ်မှတ်ထားတဲ့စျေးကွက်' ထဖွင့်လှစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ local ရံလျက်ရှိသောဧရိယာကနေပဲလူနှင့်အမျိုးသမီးအကြားဖြစ်ပျက်ဖို့အသုံးပြုချိန်းတွေ့တဲ့အခါပြန်ပါပြီလိုထက်အများကြီးပိုကြီးကြောင်းအဓိပ္ပာယ်. ဤလူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်. အားလုံးကတော့သူတို့ကိုလူများသင်တို့၏မျိုးကိုဖြစ်ရတော့မှာ, နှင့်သင်အမြဲဖြစ်စေသိမ်းယူကြလိမ့်မည်မဟုတ်. ဆိုလိုတာကဘယ်လိုအံ့သြစရာကတော့သင်ဘယ်လောက်တစ်ဦးဖမ်းသင်တို့အားပေးစေခြင်းငှါသင်တို့အားပေးဖို့သက်ဆိုင်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အတွက်အလွန်ခြားနားအောင်လုပ်ပေးမထားဘူး, '' ကြမ်းတမ်းသောနှင့်ကျဆင်းနေ '' လို့အချို့ငွေပမာဏလည်းမရှိ. သင်အမှန်တကယ် 'ကိုတဦးတည်း' 'ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည်ရှေ့တော်၌တွေ့ဆုံရန်များပါတယ်လူများနှင့်ဖြစ်နိုင်တယောက်' 'volume' ကို, (သင်တို့သည်အလွန်ကံကောင်းဖြစ်ကြသည် မှလွဲ.). တစုံတယောက်သောသူသည်လူတစ်ဦး၏အမှိုက်အခြားဘဏ္ဍာဖြစ်သလဲဆိုတာကိုသတိရ. ကြှနျုပျတို့ကိုယျတိုငျတပြင်လုံးကိုအရာယူတဲ့အချိန်မှာပြဿနာလာ.
သတိရဖို့ကအခြားအရာကျနော်တို့ဟောင်းနွမ်းခေတ်နောက်ကျလမ်းချိန်းတွေ့ဖို့အသုံးပြုသည့်အခါခြင်းဖြစ်သည်, အစည်းအဝေးကလူမျက်နှာချင်းဆိုင် IE, ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းသိကြလိမ့်မည်ဟု, ဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်စစ်မှန်သောအသက်တာတွင်အဘယ်အရာနှင့်တူသာခဲ့လျှင်တောင်မှ. သို့သော်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတူသင်တို့ကိုမကျင့်, ဒါကြောင့်သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၌သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့လျှင်သင်ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုရွေးကြပြီမည်မဟုတ်ကြောင်းလူအများကြီးကိုဖြတ်ပြီးလာမယ့်နေကြတယ်. ပင် profile များကိုဖတ်ခြင်းသည်သင်အများကြီးအိုင်ဒီယာပေးစေခြင်းငှါမသွားဖြစ်ပါတယ်, ပြီးနောက်အားလုံးကြောင့်, သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သာပစ္စုပ္ပန်ကလူတွေသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဘက်ခြမ်း. ရဲ့ရိုးသားဖြစ်ပါစေ, မည်သူမဆို '' Grumpy ရေးဖို့မယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးက, တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ halitosis နှင့်အတူ narcissist အနည်းငယ် receding ဆံပင် '' ကိုသူ့အဘို့မိမိအညစာစားပွဲချက်ပြုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းမတယောက်သည်ရှာကြံ၏.
ထိုကြောင့်သင်တို့သည်ဘေးဥပဒ်နှင့်တူမှရှောင်ရှားရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့တချို့လူတွေကြုံတွေ့ရမည်ကိုသင်တန်းများအတွက်တန်းတူဖြစ်. ထိုအခါအချို့့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မဟုတ်. တချို့ကသင်၌စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်မဟုတ်. အချို့ကစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်, ပြီးတော့ကွယ်ပျောက်လိမ့်မယ်. သင်သည်ဤအားလုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းနှင့်အကွက်ကြောင်းလက်ခံရန်နိုင်လျှင်သင်ကအများကြီးပိုကောင်းသူကတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်. သင်ရိုးရိုးလေးပြုံးနိုင်တဲ့နည်းလမ်း, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပြုံးရယ်သည်နှင့် 'Next' ဟုပြော. ထိုအခါညာဘက်ကျောမြင်းပေါ်ရ.
အလွန်အမင်းစိတ်ပျက်ရမထားပါနဲ့. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းအကြောင်းကိုသင်၏သဘောထားကရန်ဤတစ်နည်းနည်းပေါ်အောင်လုပ်ပါ, ပြီးတော့ထွက်ရနှင့်မတူညီသောလူမျိုး၏စာ​​ရေးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့အချို့သောပျော်စရာရှိသည်. chat, ပရောပရည်လုပ်ခြင်း, အချို့သောရက်စွဲများအပေါ်သွား, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့, သူနဲ့သိတယ်, ဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ 'တစ်ဦး' 'ကျွန်တော့်ကိုနောက်ထောင့်ခန့်ဖြစ်ပါသည်.
Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
Facebook ပေါ်မှာ share ဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
Reddit အပေါ်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
The First နေ့စွဲတွင်အစက်အပြောက်စေရန်ခြောက်လအလံနီ
တစ်ဦးတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အ Sensation ပါတီ Hosting မှဆယ်ချက်
ထိပ်တန်း 10 ဓာတ်ပုံအမှား
ထိပ်တန်း 10 အမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်းသည့်အခါအမှားတွေအမျိုးသားများ Make
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများသီးသန့်ဖန်တီးဦးဆောင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်. သင်ကဘဝလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား့တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးရဲ့ buddy က, ဤနေရာတွင်သင်ရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာအတိအကျဘယ်သူရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ် - ကိုယ့်ကိုကိုယ်တူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကို.
+ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ & လိင်
+ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Friendly
Our Contributors ခရီးဦးကြိုပြုခြင်း
© Copyright 2020 ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့. နှင့်ဖွဲ့ အားဖြင့် 8celerate စတူဒီယို